Apple - Izaho dia Mac | Avy amin'ny Mac aho (Pejy 9)
Ireo no MacBook vaovao lasa "antitra"
Apple dia niditra tao amin'ny lisitry ny vokatra taloha maodely 5 an'ny MacBook Air sy MacBook Pro izay amidy teo anelanelan'ny 2013 sy 2014.
Apple dia manome indroa ny fanomezana any Shina hiadiana amin'ny Covid-19
Manohy manome sarontava sy vola i Apple mba hahafahan'i Shina manohy miady amin'ny fihanaky ny Covid-19 izay misy fiatraikany tanteraka amin'ny firenena
Mampahatsiahy antsika ny browser Chrome fa aza adino ny momba ny Flash alohan'ny faran'ny taona 2020
Mampatsiahy antsika amin'ny alàlan'ny Chrome i Google amin'ny faran'ny taona 2020, afaka manadino ny fahafahantsika manokatra pejy web noforonina tao amin'ny Flash isika
Streamlabs OBS dia misy amin'ny beta ho an'ny macOS
Ny fampiharana Streamlabs OBS malaza amin'ny endriny Mac dia efa misy izao, na dia ao anaty beta aza izy izao.
Apple dia hanohy handoa ny mpiasa any ivelany ao amin'ny Apple Park na dia tsy miasa aza
Ireo mpiasa Contrasticas izay manome ny serivisin'izy ireo ao amin'ny Apple Park dia mbola handray ny asany feno na dia tsy handeha hiasa aza.
Ny beta voalohany an'ny macOS Catalina 10.15.5 sy tvOS 13.4.5 dia azo alaina izao
Ny beta voalohany an'ny macOS Catalina 10.15.5 dia azo alaina ho an'ny mpamorona ankehitriny, toy ny beta an'ny tvOS 13.4.5, ary ho an'ny vondrom-piarahamonina iray ihany.
Ahoana ny fomba famoronana sy fanamarihana PDF avy amin'ny Maps amin'ny Mac
Ahoana ny fomba hamoronana sy fanoratoro PDF avy amin'ny Maps amin'ny Mac anao. Mandefasa toerana misy tsoratadidy amin'ny PDF toy ny pro avy amin'ny Mac-nao
Apple dia manohy miasa ao an-trano amin'ny fitaovana vaovao
Ireo mpamorona lozisialy Apple dia miasa mafy ao an-trano mba hanana ny fandaharana ho an'ireo fitaovana vaovao havoaka amin'ity taona ity ara-potoana.
Ovao ny toerana misy ny pikantsary Mac
Ny pikantsary horaisinay amin'ny Macs dia voatahiry ao anaty lahatahiry mitovy foana. Saingy azonao atao ny manova azy amin'ny fampiasana ity rafitra mora ity.
Azonao atao ny manampy ny developer Mac anao amin'ity tetikasa Indie ity
Tetikasa Indie Support dia teraka niaraka tamin'ny hevitra hoe afaka manampy ny mpandraharaha izay, noho ny coronavirus, dia tsy manana hevitra momba ny fampiharana azy ireo.
Misy sary mivoaka amin'ny mety ho lojisialy vaovao Logic Pro X
Ny fisamborana izay mety ho ilay kinova Logic Pro X vaovao dia mandositra an'i Apple ao amin'ny pejin-tranonkala ho an'ny fanabeazana
Apple dia manolotra atiny manokana ho an'ny fianakaviana voafetra
Apple dia misafidy votoaty marobe manokana ho an'ireo fianakaviana voafetra any an-trano vokatry ny Coronavirus
Kitendry hitsin-dàlana ho an'ny fampiharana Apple Books Apple
Ny hitsin-dàlana amin'ny keyboard dia ny safidy tsara indrindra hampitomboana ny famokarana ary misy ihany koa amin'ny fampiharana Apple Books
Ahoana ny fampiasana ny iPad ho efijery faharoa an'ny Mac amin'ny fampiasana Sidecar
Azavainay ny fomba fampiasana Sidecar hananana monitor faharoa amin'ny Mac anao noho ny iPad anao, fa tsy mila mampiasa vola euro intsony.
Natao lavanty amin'ny $ 10.000 XNUMX ny Sneakers miaraka amin'ny Apple logo
Ny varotra mihantona amin'ny kiraro sasany misy ny Apple logo, dia nahatratra 10.000 20 dolara, taorian'ny tolotra XNUMX.
Tranonkala sy fampiharana vaovao hitadiavana ny Covid-19 avy amin'ny Apple
Ny orinasa Cupertino dia mandefa ny tranonkalany sy ny fampiharana hiadiana amin'ny ady mivantana amin'ny fiparitahan'ny Covid-19
Fanavaozana Apple Developer ho an'ny WWDC 2020
Apple Developer no ho fampiharana vaovao amin'ny alalàn'ny mpandraharaha manana ny fahafahany manangona ny vaovao rehetra momba ny WWDC 2020
Apple dia mizaha ny fitaovana AR sy VR miaraka amina mpamily mitovy amin'ny HTC Vive
Apple dia mizaha toetra ireo fitaovana virtoaly sy fampitomboana azy miaraka amin'ireo mpanara-maso miaraka amina endrika mitovy amin'ny HTC Vive
Nomad ihany koa ny ady amin'ny areti-mandringana Covid-19
Nomad dia miara-miasa amin'ny famokarana sy fizarana sarontava ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana izay miady isan'andro amin'ny coronavirus manerantany
Tranofiara voalohany ho an'ny andian-tsarimihetsika Apple TV "Defending Jacob" +
Apple dia namoaka tao amin'ny fantsona YouTube azy, ny tranofiara ofisialin'ny voalohany ho an'ny andian-tsarimihetsika mini Defending Jacob, miaraka amin'i Chris Evans.
11 × 28 Podcast: manaloka ny MacBook Air ny iPad Pro
Herinandro iray hafa dia nivory ny ekipa Soy de Mac sy ny Actualidad iPhone hiresaka ny vaovao farany ...
Hiezaka ny hanokatra magazay ara-batana sasany i Apple amin'ny tapany voalohan'ny volana aprily
Ny sasany amin'ireo magazay 458 ananan'ny orinasa any ivelan'i Shina, Hong Kong ary Taiwan, dia afaka nivoha ny volana aprily ho avy izao
Apple dia namoaka ny ARKit 3.5 ho an'ny zava-misy vaovao nampitomboina
Apple dia tsy namoaka ny kinova farany an'ny watchOS sy macOS Catalina, nanangana ny ...
1978 nisoratra anarana amin'ny lavanty ny logo Apple
Ny lavanty farany an'ny vokatra Apple dia hita amin'ny mari-pamantarana ofisialin'ny mpivarotra Apple nanomboka ny taona 1978.
Apple TV dia hanolotra tahiry farafahakeliny 64GB ary hanampy fampiasa vaovao mahaliana ny tvOS
Tamin'ny fiandohan'ny taona lasa dia nanambara ireo mpanamboatra fahitalavitra Smart TV fa mampiditra ny serivisy sasany an'ny Apple ...
Ny fetran'ny fividianana sasantsasany amin'ny tranokala Apple dia manjavona
Apple dia hamerina ny tahiry amin'ny fividianana ny vokatra ary manafoana ny fetra sasany amin'ny fividianana an-tserasera
Miseho amin'ny tsaho indray ny base AirPower noho ny Ming-Chi Kuo
Rehefa toa nifarana ny tsaho rehetra momba ny tobin'ny AirPower, Ming_chi Kuo dia miseho amin'ny vaovao
Disney + dia hampihena ny kalitaon'ny serivisy ao aminy toy ny Apple TV +, Netflix, YouTube ary Amazon Prime
Rehefa manomboka ny diany any Espana sy ireo firenena eropeana hafa Disney + rahampitso 24 martsa, dia tsy hanao izany amin'ny kalitao am-boalohany ny atiny.
Ny teboka fidirana manokana avy amin'ny iPhone mankany Mac dia tsy mahomby
Ny mpampiasa sasany dia mitatitra olana amin'ny safidin'ny fidirana manokana ary mampitandrina i Apple fa ho tonga amin'ny iOS manaraka ny fanitsiana
New MacBook Airs, Mac mini vaovao, iPad Pro vaovao ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro ao amin'ny SoydeMac
Ireo fitaovana vaovao natombok'i Apple tamin'ity herinandro ity dia ampihimamba ny vaovao amin'ny alahady 22 martsa izao. MacBook Air vaovao, Mac mini ary iPad Pro
Amazon Prime Video koa dia mampihena ny kalitaon'ny atiny toy ny Netflix, YouTube ary Apple TV +
Miaraka amin'ny Amazon Prime Video dia efa misy 4 ireo orinasan-dahatsary mikoriana izay nampihena ny kalitaon'ny serivisin'izy ireo mba hamoahana ny Internet any Eropa
Manova ny fandefasana entana ho an'ny maodely MacBook Air, iPad Pro, ary Mac mini vaovao
Apple dia nanolo ny MacBook Air, Mac mini ary iPad Pro izay tsy maintsy nalefany ho an'ny mpanjifany amin'ireo maodely vaovao natolotra tamin'ity herinandro ity
Apple TV + dia hampihena ny kalitaon'ny horonantsary ihany koa
Ny fihenan'ny kalitaon'ny horonantsary amin'ny serivisy atiny streaming dia mitombo. Toa ny herin'ny fanjifana be no mandray an-tanana ireo fepetra ireo
Ahoana ny fanesorana ireo fampiharana amin'ny menio zaraina amin'ny macOS
Ny famafana ireo rindranasa aseho amin'ny menio fizarana dia dingana iray tena tsotra izay zahay eto ambany.
Apple dia afaka nanangana iPad Pro 12,9-inch miaraka amin'ny efijery mini LED amin'ny faran'ity taona ity
Na eo aza ny nanolorany ny taranaka fahefatra an'ny iPad Pro tamin'ity herinandro ity, Apple dia afaka gaga antsika tamin'ny fararano ary nandefa modely vaovao miaraka amin'ny efijery mini LED.
Tim Cook dia nanambara fanomezana bebe kokoa hiadiana amin'ny Covid-19
Apple miaraka amin'i Tim Cook amin'ny familiana dia te hanampy amin'ny fanomezana bebe kokoa ho an'ireo firenena hiadiana amin'ny areti-mifindra coronavirus
Netflix sy YouTube no voalohany nampihena ny kalitaon'ny horonantsarin'izy ireo
Zava-dehibe ny fitazonana ny fifandraisana amin'ny tamba-jotra ary ny fitandroana ny fitoniana amin'ny fifandraisan-davitra, noho izany dia hampihena ny kalitaon'ny horonantsary koa ny YouTube
Araho maso ny Monitor Monitor an'ny Mac anao indraindray
Zahao indraindray ny Monitor an'ny activité Mac anao. Topazo maso indraindray mba hahitana fa miasa ara-dalàna ny fizotrany rehetra.
Safidy hanovana ny sary an-drindrina ao amin'ny CarPlay sy ny fanatsarana amin'ny Maps
Fivoahan'ny CarPlay sy Maps vaovao navoakan'ny mpanelanelana malaza 9To5Mac nametraka ny takelaka teo ambony latabatra sy ny vaovao tao amin'ny fampahalalana
Ny iPad Pro 2020 dia tantanan'ny RAM 6 GB
Ny sehatr'asa iPad Pro iray manontolo dia tantanan'ny RAM 6 GB, ho an'ny efatra amin'ireo taranaka natombok'i Apple tamin'ny taona 2018.
Ny fotoana fandefasana amin'ny AirPods dia nohafohezina
Ny fotoana fandefasana ho an'ny AirPods dia mihena tsikelikely, indrindra noho ny fanarenana kely any Shina
Nofoanana ny famoahana tantara an-tsehatra ny fanadihadiana nataon'i Beastie Boys Story
Ny horonantsary fanadihadiana an'ny vondrona Beastie Boys izay nokasain'i Apple halefa amin'ny sinema, dia ho tonga mivantana amin'ny serivisy streaming video an'i Apple.
CarPlay afaka manolotra fampahalalana bebe kokoa amin'ny mpampiasa
CarPlay, ny rafitra izay tsy maintsy anitaran'i Apple ny iPhone ao anaty fiara ka afaka miditra ...
Araraoty ny tags amin'ny fikarohana ataonao amin'ny Spotlight
Araraoty ny tags amin'ny fikarohana ataonao amin'ny Spotlight. Vondron'ireo antontan-taratasy miaraka amina soratra mitovy aminy ary azonao atao ny mitanisa azy ireo amin'ny Spotlight.
Apple dia mamaly ny fisalasalana momba ny fanidiana ny fivarotany.
Apple dia mamaly ireo fanontaniana napetraka matetika avy amin'ny fanidiana ny fivarotany. Ny iray amin'ireo angatahina indrindra indrindra dia ny amin'ny fotoana fiverenana?
Ny mpiasan'ny campus ao amin'ny Culver City dia manaporofo fa voan'ny coronavirus
Ny mpiasa Apple faharoa izay nanamarina fa voan'ny coronavirus dia miasa ao amin'ny Apple Music sy Apple TV + foibe any Culver City
Nanasazy 1.100 miliara euro ny Apple noho ny fampiharana antitrust
Ny sazy mihatra mitentina iray tapitrisa dolara napetraky ny Fahefana misahana ny fifaninanana frantsay dia mahatratra 1.100 tapitrisa euro
Ny fanohanan'i Apple sy ny fankasitrahany ny serivisy vonjy taitra
Apple dia mankasitraka ny asa vitan'ny serivisy vonjy taitra sy ny sisa amin'ny olona miady amin'ny coronavirus Covid-19
Fampiharana COVID-19: Avy amin'ny loharano ofisialy ihany.
Hamafisin'i Apple ao amin'ny magazay fampiharana izany mba tsy hisy na inona na inona momba ny COVID-19 navoaka avy amin'ny loharanom-baovao ofisialy.
Ny fandoavana trosa dia tamin'ny volana martsa tao amin'ny Apple Card, nahemotra
Apple miaraka amin'i Goldman Sachs dia nanapa-kevitra ny hampihemotra ny fiampangana mandritra ny volana martsa ho an'ny mpampiasa Apple Card ary hampihemotra azy tsy misy zanabola.
Fivarotan-tsiran-dra, AirTags sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Amin'ity herinandro ity dia manana vaovao mahaliana marobe izahay ary te-hametraka ny Covid-19 ho an'ny malaza indrindra
Nandao ny filankevi-pitantanana Microsoft i Bill Gates
Mpanorina, naman'i Steve Jobs, Bill Gates, dia nanambara fa hiala amin'ny filankevi-pitantanana Microsoft izy hifantoka amin'ny asa soa.
Apple dia manidy ny fivarotana Apple rehetra any ivelan'i Sina hatramin'ny 27 martsa
Ny krizy manerantany izay raisin'ny coronavirus dia nanery an'i Apple hanidy ireo fivarotana mihoatra ny 500 ananany manerana an'izao tontolo izao
Manidy ny fivarotana Apple rehetra any Espana i Apple
Nikatona ireo fivarotana Apple tany Espana mandra-pahatongan'ny fampandrenesana hafa noho ny coronavirus. Fepetra azo tsinjovina ary efa mandeha izao
WWDC 2020 dia ho "traikefa an-tserasera vaovao"
Nanamafy i Apple fa tsy nofoanana ny WWDC 2020 fa manova ny endrika kosa noho ny virus coronavirus. Hiaina traikefa amin'ny Internet vaovao ity taona ity
Nofoanan'ny Microsoft ny Microsoft Build tamin'ny volana Mey noho ny Covid-19
Ny hetsika ho an'ireo mpamorona Microsoft izay nokasaina tamin'ny volana Mey dia nofoanana noho ny valanaretina coronavirus
Ny Coronavirus dia misy fiatraikany amin'ny The Morning Show
Ny andian-tsarimihetsika Apple TV + The Morning Show dia manafoana ny fandraisam-peony mandritra ny roa herinandro hanandramana miaro tena amin'ny coronavirus
Podcast 11 × 26: Ny antsipiriany rehetra momba ny iOS 14
Herinandro iray hafa dia nivory ny ekipa Soy de Mac sy iPhone Actualidad hiresaka ny vaovao farany mifandraika amin'i Apple.
Amin'ity faran'ny herinandro ity, ny Apple Stores rehetra any Italia dia manidy ny varavarany noho ny coronavirus
Amin'ny faran'ny herinandro ho avy izao, ny Apple Stores rehetra any Italia dia hanidy ny varavarany manaraka ny torolàlana avy amin'ny governemanta italianina mba hahitana ny coronavirus
Ny haino aman-jery sasany dia milaza fa tsy hanana keynote an'i Apple isika amin'ity volana ity noho ny coronavirus
Toa ny fehezanteny ifampiresahana tamin'ny 31 martsa ho avy izao no mety ho voakasiky ny fameperana Covid-19
Apple AirTags dia hitantana bateria azo soloina
Ny vaovao farany mifandraika amin'ny Apple AirTags, dia manome sosokevitra fa tsy hanisy bateria azo averina intsony izy ireo, fa bateria CR2032
Ny AMD's New Navi 2X GPU dia mety hitondra an'i Ray Tracing mankany amin'ny Mac
Ny Navi 2X GPU vaovao an'ny AMD dia afaka mitondra an'i Ray Tracing mankany amin'ny Mac. Ity rafitra fandefasana sary 3D tena izy ity dia tsy ho an'i Nvidia irery.
Androany dia niato tao amin'ny Apple ny tanàna amerikana sasany
Androany ao amin'ny Apple dia nofoanana ny hetsika any amin'ny tanàna sasany any Etazonia satria mihombo hatrany ny valanaretina Coronavirus
Ahoana ny famoahana ny fisoratana anarana amin'ny mailaka amin'ny alàlan'ny Mail
Misorata anarana mora foana amin'ny lisitra mailaka avy amin'ny fampiharana macOS Catalina Mail
Nanoro hevitra ireo mpiasan'ny Apple Park hiasa an-trano noho ny coronavirus
Apple dia hampirisika ny mpiasan'izy ireo hiasa an-trano ary tsy handeha any Apple Park noho ny virus Covid-19
Manome voninahitra ny mpitondra vehivavy ho avy i Apple
Apple, ho fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy, dia miara-miasa amin'ny Girls Who Code hanasongadinana ny asan'ireo izay ho vehivavy mpitarika amin'ny ho avy
Nanjary fanomezam-boninahitra ny vehivavy ny tranonkalan'i Apple
Nanokana ny tranokalany iray manontolo i Apple mba hankalazana ny Andron'ny Vehivavy. Eo amin'ny fonony ny sasany amin'ireo vehivavy manan-danja indrindra eran'izao tontolo izao
Apple-1 miasa tanteraka dia mandeha lavanty any Boston
Apple-1 miasa tanteraka dia lavanty ao Boston. Ny iray amin'ireo solosaina miisa 200 voalohany nataon'i Steve Wozniak sy Steve Jobs dia nandeha lavanty.
Nofoanana ny SXSW, izay nambaran'i Apple fa tsy hanatrika izany
Taorian'ny fanafoanana ny fanatrehan'ny lehibe indostrialy tao amin'ny SXSW dia noterena hanafoana ny hetsika tamin'ity taona ity ny SXSW.
Bug vaovao ao amin'ny chip Intel an'ny Mac anao, izay tsy azo ahitsy
Fahalemena vaovao amin'ny chips Intel ary amin'ity indray mitoraka ity dia tsy misy vahaolana. Tsy mahagaga raha tadiavin'i Apple hametraka ARM ny Macs vaovao
Manoro hevitra ny manampahefana any California hanafoana ny famelabelarany noho ny coronavirus
Maneran-tany dia iharan'ny kapoka mahery vaika amin'ny virus coronavirus izahay. Manoro hevitra an'i Apple ny Apple Santa mba tsy hanao hetsika
Apple dia tsy nahavita nampiakatra ny sazy noho ny fampiasana patanty Caltech
Ny antso izay natolotr'i Apple momba ny didim-pitsarana izay nandidy azy handoa vola 838 tapitrisa amin'i Caltech noho ny fandikan-dalàna momba ny patanty dia mbola tsy nahitana fahombiazana andrasana.
Ny Apple Maps amin'ny ho avy dia afaka mampiseho sosokevitra momba ny toerana haleha na ny zavatra ho hita
Apple Maps dia mety misy sosokevitra momba ny toerana haleha na ny zavatra ho hita, miankina amin'ny toe-javatra misy anao na ny dia nataonao taloha.
Vonona izao ny Safari Technology Preview 102
Apple dia namoaka kinova vaovao an'ny fizahan-tany fanandramana, Safari Technology Preview. Azo ampiasaina izao ny kinova 102.
Nolavina tamin'ny fomba ofisialy ny tsaho momba ny fahatongavan'i Apple Pay any Mexico
Ny mety hahatongavan'ny Apple Pay amin'ireo mpampiasa ny banky Banregio de México dia nolavina. Ny banky mihitsy dia namoaka bitsika mandà ny vaovao
Nisisika i DigiTimes: ny AirPods Pro 'Lite' vaovao dia hamokatra amin'ny telovolana faharoa
Araka ny DigiTimes, ny fiandohan'ny famokarana betsaka ny AirPods Pro "Lite" dia hatao amin'ny faran'ny telovolana voalohany, manomboka ny faharoa
Afaka manampy amin'ny vaksinin'ny Coronavirus ny Mac-nao
Ny tetik'asa Fanding @ Home dia niditra tamin'ny fikarohana ny vaksinin'ny coronavirus, ka raha tianao dia afaka mandray anjara amin'ny Mac ianao
Disney +: lazainay aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao
Mbola tsy mahalala Disney +? Lazainay aminao ny tsiambaratelon'ny serivisy streaming vaovao izay mikendry ny hifaninana amin'i Netflix. Inona ny fitaovam-piadianao hahatratrarana azy?
Apple dia mamolavola iPads, MacBooks ary iMacs miaraka amin'ny fisehoana Mini-LED
Apple dia mamolavola iPads, MacBooks, ary iMacs miaraka amin'ny fisehoana Mini-LED. Fitaovana vaovao enina no hanomboka eo anelanelan'ny taona 2020 sy 2021 miaraka amin'ireo takelaka vaovao ireo.
Nofoanana tamin'ny fomba ofisialy ny Google I / O noho ny coronavirus Inona no hitranga amin'ny WWDC?
Ny hetsika Google, Google I / O dia nofoanan'ny orinasa tamin'ny fomba ofisialy noho ny olana ateraky ny covid-19. Inona no hitranga amin'ny WWDC?
Vaovao tsara ho an'i Apple miaraka amin'ny famokarana mitombo ao Foxconn
Foxconn dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy fa amin'ny faran'ity volana martsa ity ny famokarana dia ho amin'ny ambaratonga mahazatra, miaina ny teknolojia.
Apple dia namoaka beta fahefatra an'ny macOS 10.15.4 sy tvOS 13.4
Apple dia namoaka ny beta fahefatra an'ny macOS 10.15.4 sy tvOS 13.4 ankoatry ny hafa. Tsy misy ho an'ny mpamorona afa-tsy izahay, akaiky kokoa ny beta ho an'ny daholobe izahay
Ny volana martsa dia manomboka amin'ny Apple manokana miaraka amin'ny Apple session izy: "Mamorona izy ireo"
Apple dia mandefa andianà vaovao vaovao 5.000 androany amin'ny fandaharam-pianarana Apple antsoina hoe "Mamorona Izy ireo." Amin'izy ireo dia ny vehivavy mpamorona an'izao tontolo izao no protagonista
Miverina ny tsenam-bola: mampitombo ny sandan'ny anjarany ny Apple
Ny anjaran'ny Apple dia manomboka miakatra ny sandan'ny tsena ara-bola. Manomboka mahazo fahatokisana indray izy ireo na eo aza ny fijanonan'ny virus coronavirus
Ny governemanta Trump dia nifampiresaka tamin'ny governemanta India mba hahafahan'ny Apple manokatra ny fivarotany manokana
Ny drafitra fanitarana an'i Apple dia nirindra tato anatin'ny volana vitsivitsy noho ny fidiran'ny governemanta Trump amin'ny governemanta Indiana.
Ny tatitra ASPI dia miampanga ireo mpivarotra Apple ho nanararaotra ireo Uyghurs nafindra toerana
Ny tatitra ASPI dia miampanga ireo mpamatsy Apple ho manararaotra ireo mpiasa Uighur any amin'ireo ozinina ao Shina
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny Launchpad rehefa tsy mandeha tsara
Amin'ny alàlan'ny Launchpad, azontsika atao ny mampiasa ny tsirairay amin'ireo rindranasa napetrakao amin'ny Mac, ...
Toronto dia efa manana ny Apple Store faharoa ary miasa
Apple manokatra Apple Store faharoa ao Toronto. Fivarotana maoderina no nohavaozina tanteraka amin'ny alàlan'ny iray teo aloha. Mahavariana ny valiny.
Ny mpiasan'ny paoma any Shina dia simban'ny orinasa
Apple dia mandefa fonosana fanampiana fanampiana ara-pahasalamana, sakafo ary iPad ho an'ny mpiasa rehetra natokana ho an'ny valanaretina coronavirus any Shina.
Kitendry Apple trackpad ho an'ny iPads? Hisy fiatraikany amin'ny varotra Macs ve?
Apple dia mikasa ny handefa ny kitendry iPad misy trackpad, izay mety ho kapoka azo antoka amin'ny fivarotana Mac?
Apple dia miara-miasa amin'i Ed Farm hitondra zava-misy marobe amin'ny fanabeazana.
Apple dia hampiasa ireo fitaovany zava-misy nampitomboina izay hiaraka amin'i Ed Farm dia hanomboka hanangana endrika fampandrosoana vaovao
Coronavirus sy Apple: Lalao voarara, fanantenan-tena avy amin'ny Tim Cook sy WWDC 2020
Vaovao samihafa no nipoitra mifandraika amin'ny coronavirus sy Apple. Ny sasany izay mety hanjary hifanohitra amin'izy ireo.
Varotra varotra vokatra Apple vaovao izay misy taratasy nosoniavin'i Steve Jobs
Hatramin'ny nahafatesan'i Steve Jobs, maro ireo vokatra tonga nanao varotra nanao sonia ...
Nihena ny fitsapana fiara mandeha irery nataon'i Apple
Toa ny taon-dasa 2019 dia nahenan'ny Apple Apple ny fitsapana teny an-dalana tamin'ny fiarany mizaka tena
Apple Glasses dia mety ho akaiky kokoa ny lasa tena zava-misy
Apple Glasses miaraka amin'ny zava-misy mitombo dia mety ho akaiky kokoa noho ny hatramin'izay noho ny tsaho momba ny fenitra Wi-Fi vaovao izay hanombohan'ny Apple hampiasa
Ireo router an'ny Eero Amazon dia mifanaraka amin'ny HomeKit
Ny router an'i Eero sy Eero Pro an'i Amazon dia efa mifanentana tanteraka amin'ny HomeKit sy ny haavon'ny fiarovana napetrak'i Apple ao amin'izy ireo.
Niala tamin'ny toeran'ny CEO Disney i Bob Iger taorian'ny nandaozany an'i Apple noho ny fifanolanana
Taorian'ny nialàny tao amin'ny filankevi-pitantanan'ny Apple, tsy i Bob Iger intsony no CEO an'ny Disney - tonga ny fotoana hisotroan-dronono.
Vonona ny beta fahatelo an'ny macOS 10.15.4, tvOS 13.4 ary ny watchOS 6.2
Azo alaina izao ary alaina ho an'ny mpamorona ihany ny kinova fahatelo amin'ny beta macOS 10.15.4, Apple TV 13.4 ary watchOS 6.2
Podcast 11 × 24: Google Rate, iPhone 12 sy maro hafa
Misy fizarana vaovao amin'ny podcast Soy de Mac sy Actualidad iPhone hita ao amin'ny YouTube, Spotify, iVoox ary Google Podcast
Johnson & Johnson sy Apple dia nandefa ny fanadihadiana mba hampihenana ny lozam-pifamoivoizana
Ny fahafaha-manolotra aroson'ny fampiharana miaraka amin'ireo fitaovana toa ny Apple Watch sy ny iPhone dia ampiasaina hanatsarana ny fahasalaman'ny olona.
Apple Support dia manolotra horonantsary misy hitsin-dàlana macOS Catalina isan-karazany
Apple dia manampy horonan-tsary vaovao miaraka amin'ny hitsin-dàlana fitendry marobe ho an'ny macOS Catalina ao amin'ny fantsona YouTube Apple Support.
Coronavirus: fepetra fisorohana amin'ny fivorian'ny fivorian'ny tompon-tany an'i Apple
Coronavirus: Apple dia mangataka amin'ireo tompon-tany izay efa lasa nankany Chine na any amin'ny faritra mikorontana mba tsy hanatrika ny fivorian'ny tompon-trosa manaraka
Birao vaovao ho an'ny Apple any akaikin'ny Madison Square Garden
Apple dia manana lease amin'ny tranobe iray izay tena akaikin'ny Madison Square Garden.
Mihoatra ny antsasaky ny fivarotana Apple any Shina no efa misokatra
Manohy manokatra tsikelikely ny fivarotany ao Shina i Apple fa ny hetsika mahazatra sy mahazatra an'ireny daty ireny dia handany vola
Apple dia tsy afaka manao antso avo intsony amin'ny ady amin'ny patanty amin'ny VirnetX
VirnetX dia toa rehefa afaka 10 taona dia nandresy tamin'ny ady ara-dalàna tamin'i Apple izy tamin'ny fandikana ny patanty VPN sy FaceTime
Apple dia hankalaza ny andron'ny vehivavy amin'ny alàlan'ny "She Creates"
Apple dia hankalaza ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy amin'ny fanontana manokana an'ny Androany ao amin'ny Apple manerana izao tontolo izao, eo ambanin'ny sora-baventy "Izy Mamorona."
Ny Mac voalohany miaraka amina fikirakira azy manokana dia andrasana amin'ny fiandohan'ny 2021
Ny Mac voalohany miaraka amina fikirakira azy manokana dia andrasana amin'ny fiandohan'ny 2021. Hametraka ARM manokana miaraka amin'ny teknolojia 5nm izy ireo, toy ireo A14 manaraka.
Apple TV, AirPods ary iPod Touch vaovao no mivoaka avy ao amin'ny Intranet Target
Navoaka tao amin'ny intranet Target ny Apple TV, AirPods ary iPod Touch vaovao. Pikantsary iray amin'ny scanner an'ny trano fitehirizana dia mampiseho andinin-tsoratra vaovao.
Ho sarotra ny mametraka configurer an'ny router an'ny HomeKit
Apple dia nilaza fa ny router miaraka amin'ny HiomeKit dia mifanakaiky kokoa ary hampitombo ny fiarovana nefa ho sarotra kokoa ny manamboatra azy.
Ity no mety ho headphones premium indrindra avy any Apple
Ny tsaho dia miresaka momba ny headphone vaovao ary ny AirPods X no niantsoan'izy ireo an'ity fiheverana ity momba ny mety ho toetran'izy ireo araka ny YouTuber
Ny MacBook Pros 13 next manaraka dia afaka nametaka ny Intel Ice Lake 10 Gen
Ny 13 manaraka "MacBook Pros manaraka dia afaka nametraka ny andiany faha-3 an'ny Intel Ice Lake. XNUMXDMark no nisioka tamin'ny fanamafisana izany.
Raha mila mamerina ny MacBook Pro ianao dia izao no fomba hanaovana azy
Raha te-hialana amin'ny MacBook Pro ianao dia asehonay anao ny fomba hamafana ny tsirairay amin'ireo angon-drakitra ary hamela ny solosaina rehefa nandao ny orinasa izy
Manomboha mandray ireo dingana voalohany amin'ny famolavolana sary miaraka amin'ireo rindranasa ireo
Tianao ve ny famolavolana sary? Aza adino ity safidin'ireo rindranasa ity hamolavolana sy hametrahana amin'ny alàlan'ny Mac. Iza amin'ireo no tianao?
Ny famokarana AirPods, MacBooks ary Apple Watch dia mifindra any Taiwan
Apple dia mieritreritra ny hamindra ny famokarana vokatra marobe any Taiwan, mba hisorohana ny olana amin'ny famokarana sendra azy any Shina.
Ahoana ny fanontana na ny fitehirizana ny Kalandrie PDF ho an'ny Mac
Asehonay aminao ny fomba ahafahanao mitahiry na manonta ny kalandrie Mac anao amin'ny PDF tsotra sy haingana
Ahoana ny fomba ahazoana ny vokatra Crossfade amin'ny Mac amin'ny Apple Music
Raha te-hilalao ny mozika Apple Music anao amin'ny effet Crossfade ianao dia hampahafantatra anao ny fomba hanaovana azy amin'ny Mac anao ity tutorial ity.
Afaka nahita Apple Pencil niaraka tamin'ny sensor haptic izahay
Apple dia nametraka patanty izay mampiseho amintsika fa hiasa amin'ny famoronana Apple Pencil misy sensor haptic izy io.
Araka ny voalazan'i Ming-Chi Kuo dia am-pamokarana ny AirTags
Ny AirTags dia mety efa namokatra betsaka araka ny voalazan'ny mpandalina Ming-Chi Kuo ary raha manazava izy fa azo aseho amin'ny volana martsa izy ireo
Apple avo roa heny ny fanomezana mba hiadiana amin'ny coronavirus
Tim Cook dia nandefa mailaka tamin'ny mpiasany nampandre azy ireo fa ny fanampiana natolotr'i Apple ho an'ny ady amin'ny coronavirus dia avo roa heny.
Ahoana ny fomba fanakanana ny fifandraisana amin'ny mailaka amin'ny fomba tsotra
Atorinay anao ny fomba hanakanana haingana ireo mpandefa tsy ilaina amin'ny fampiharana mailaka an'i Apple, Mail
Nanamafy i Apple fa hisy fiantraikany amin'ny karama isan-telovolana ny coronavirus
Ao amin'ny Apple dia mandefa fanambarana ofisialy miaraka amin'ny vaovao izay efa hitantsika nandritra ny andro maro tamin'ny tsaho izahay ary izany dia hisy fiantraikany amin'ny karama isan-telovolana ny coronavirus.
Hetsika Apple mety amin'ny 31 martsa
Ny tsaho dia manondro fa hanana hetsika isika amin'ny volana martsa ary mametraka ny daty marina hanolorana ny orinasa ny tranonkala iPhone-Ticker.
Hihena ny fandefasana solosaina manerantany noho ny Covid-19
Ny fandefasana ny MacBook sy ny solosaina hafa avy amin'ny marika hafa dia hidina raha jerena amin'ny tarehimarika noho ny valanaretina coronavirus izay mahazo an'i Shina.
Ilay heverina fa AirPods Pro Lite dia tsy hanomboka famokarana amin'ny telovolana faharoa
Ny famokarana ny AirPods Pro Lite dia tsy hanomboka mandritra ny telovolana faharoa amin'ny taona satria toa tokony ho tamin'ny fiandohan'ireo tsaho ireo.
Apple Edge Cache: Ho afaka hiasa haingana ny orinasa
Serivisy vaovao avy any Apple no nahita ny mazava. Apple Edge Cache dia azo alaina amin'ny orinasa ankehitriny izay mampanantena famoahana votoaty eo noho eo.
Azonao atao izao ny manamarina ny fitateram-bahoaka any Barcelona sy ny tanàna hafa ao amin'ny Apple Maps
Apple dia nanampy ny safidy fitateram-bahoaka ao an-tanànan'i Barcelona. Vaovao tsara izay manakaiky ny Apple Maps amin'ny Google Maps
Apple dia tsy maintsy mandoa ny mpiasan'ny Apple Store amin'ny ora mihoatra ny ora
Apple dia tsy maintsy mandoa ny mpiasan'ny Apple Store amin'ny fotoana ampanjariany amin'ny faran'ny androny mba hamakivakiana ireo fepetra fiarovana tsy maintsy atao
Nofoanana ny MWC, HomePod mora vidy ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Ny fanafoanana ny MWC dia tsy voamariky ny teniko avy any Mac aho toa ny sisa amin'ireo vaovao miavaka amin'ity herinandro ity
Ity no trano mahomby amin'ny ho avy hoy i Apple
Apple dia manohy manoratra ny patanty ary amin'ity tranga ity dia anjaran'ny iray mifandraika amin'ny Homekit sy ny trano manan-tsaina
Ahoana ny fomba hanampiana fampiasa teny miafina amin'ny efijery fidirana ao amin'ny macOS
Raha tianay ny ekipanay hilaza aminay ny mety ho tenimiafin'ny fidiran'ny ekipanay, dia asehonay anao ny dingana manaraka.
Foxconn dia te-hanomboka ny famokarana amin'ny antsasaky ny orinasa amin'ny faran'ny volana feb
Mety hanomboka amin'ny orinasa Foxconn any Shina ny asa amin'ny faran'ny volana febroary na amin'ny voalohan'ny volana martsa, ireo orinasa novonoin'ny coronavirus
Podcast 11 × 22: Tonga amin'ny teknolojia ny coronavirus
Herinandro iray hafa dia voatery niresaka momba ny coronavirus izahay sy ny vokatr'izany eo amin'ny sehatry ny teknolojia ...
Tsaho iray mametraka an'i AirPods Pro Lite eo ambony latabatra
Ny tsaho momba ny mety fandefasana AirPods Pro Lite dia eo an-tampon'ny latabatra ankehitriny
Ny hetsiky ny Apple Card anao koa amin'ny endrika OFX
Raha manana ny Apple Card ianao dia tokony hahafantatra fa afaka mandefa ny angon-drakitrao tsy amin'ny endrika CSV ihany fa amin'ny OFX manokana ihany koa
Ny adin'ny patanty farany nataon'i Apple tamin'i VirnetX dia tsy hanana famerenana fitsarana
Apple dia niatrika ny troll patent VirnetX nanomboka tamin'ny 2010. Satria tranga patanty izy ireo, matetika dia mandany taona maro ...
Raha efa ratsy ho an'ny Mac ny kiheba Chrome, dia jereo izay ataon'ny 6.000
Anio dia asehonay anao ny fitsapana iray hafa izay manamafy fotsiny fa tokony hotehirizina hatrany amin'ny Google Mac araka izay azo atao ny Google Chrome.
Nilaza i Ming-Chi Kuo fa tandindomin-doza ny famokarana Apple amin'ny virus coronavirus
Ny fiverenana amin'ny ara-dalàna amin'ny famokarana ny vokatra Apple sy ny sisa amin'ireo orinasa any Shina dia voan'ny coronavirus
Ny tsaho dia manondro fa hanana HomePod mora vidy kokoa isika
Roa taona taorian'ny namarotana ny HomePod dia nilaza ny tsaho fa afaka mametraka maodely vaovao sy mora vidy kokoa i Apple
Ampiasao ny fifehezana feo hifehezana ny Mac
Avy amin'ny macOS Catalina dia afaka ampiasana ny fifehezana ny feo amin'ny Mac isika. Mianara mampiasa azy amin'ny asany rehetra.
Ahoana ny fomba hanampiana adiresy Outlook.com amin'ny mailakao amin'ny Mac
Raha te hanana kaonty mailaka an'ny Outlook ao anatin'ny mailaka amin'ny Mac ianao dia araho ity tugorila tsotra ity
Fahalemena raikitra, karama Wozniak ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro ao amin'ny SoydeMac
Amin'ity herinandro ity isika dia manana vaovao mahaliana momba an'i Apple ary toy ny mahazatra dia ampifandraisinay amin'ny Mac avy aho
Hevitra vaovao ho an'ny processeur AMD hita ao amin'ny macOS 10.15.4 Beta
Hevitra vaovao ho an'ny processeur AMD hita ao amin'ny macOS 10.15.4 Beta. Mety ho fitsapana anatiny tsotra fotsiny izy ireo, saingy mazava ny andinin-tsoratra masina.
Apple dia te-hanandrana modely GPS vaovao ao amin'ny Apple Park
Apple dia nandefa alalana tamin'ny alàlan'ny injenieran'ny famolavolana rafitra mba hizaha toetra GPS vaovao ao amin'ny Apple Park
Ireo mpamorona dia afaka mamorona rindranasa manokana ho an'ny sekoly
Apple amin'ny alàlan'ny fanambarana amin'ny alàlan'ny tranonkalan'ny mpamorona dia ahafahan'izy ireo mamorona fampiharana manokana ho an'ny sekoly
Tsy fantatra na hanokatra ny fivarotany any China ny Apple amin'ny 10 Febroary.
Tsy mazava i Apple fa hanokatra ireo fivarotana mihidy ao Shina izy noho ny virus corona. Avy amin'ny tanan'i Dreidre O'Brien ny vaovao
Ny karaman'i Steve Wozniak ao amin'ny Apple dia $ 50 isan-kerinandro
Amin'ny maha mpiasa Apple sisa azy dia manana karama 50 $ isan-kerinandro i Steve Wozniak.
Ny headphones premium an'ny Apple dia nalaina tamina patanty
Apple dia mametraka patanty ho an'ny headphone premium-range sy sofina vaovao izay ho tena marani-tsaina tokoa.
Apple dia manomana ny fampielezan-kevitra "Miverina any an-tsekoly" any Japon
Hanomboka rahampitso ny orinasa Cuperitno ny tolotra miverina an-dakilasy miaraka amin'ny Macs sy iPads ho protagonista. Karatra fanomezana hatramin'ny $ 165
Spotify dia mahatratra 125 tapitrisa ny mpanjifa mandoa vola
Ny isan'ny mpampiasa ny sehatry ny mozika streaming an'i Apple dia 271 tapitrisa, ka 125 amin'izany no aloa.
Akatona avy hatrany ny Chrome miaraka amin'ny hitsin-dàlana cmd + Q
Amin'ny alàlan'ny default, mila tsindrio ny baiko + Q mandritra ny roa segondra hanidiana Chrome. Vonoy izy io mba ho eo akaiky eo ary ialao ny toe-javatra mahamenatra.
Ireo mpamatsy sinoa an'i Apple hanombohana indray ny famokarana amin'ny 10 Febroary
Ireo mpamatsy sinoa an'i Apple dia hanomboka ny famokarana amin'ny 10 Febroary. Izany dia raha tsy manitatra ny fialantsasatra amin'ny taom-baovao ny governemanta sinoa.
Ny mpiasa SAP dia misafidy Mac sy macOS Catalina hiasa
Fampitomboana ny fampiasana Macs sy macOS Catalina OS fanavaozana ao amin'ny SAP indroa aorian'ny 15 volana
Ny famatsiam-bola tsy misy zanabola dia mbola misy amin'ny Apple
Apple dia manampy indray ny famatsiam-bola ny vokariny amin'ny zero raha 299 euro. Ny volana Febroary dia afaka mividy zanabola 0% ianao
Ahoana ny fanovana ny endri-tsoratra tsy misy fampiasa ao amin'ireo pejy
Ahoana ny fanovana ny endri-tsoratra tsy misy fampiasa ao amin'ireo pejy. Raha mampiasa zavatra hafa ankoatry ny helvetica ianao, dia azonao atao ny manova azy hiseho tampoka.
Ny Coronavirus dia manery an'i Apple hanidy ny fivarotany sy ny biraony rehetra any Shina hatramin'ny 9 Febroary
Ny coronavirus dia manery an'i Apple hanidy ny fivarotany sy ny biraony rehetra any Shina hatramin'ny 9 Febroary. Ity fanidiana ity dia mety hitarina.
Ahoana ny fomba hisorohana ny MacBook tsy hanomboka ho azy
Hatramin'ny 2016 dia manomboka ho azy ny MacBooks rehefa nosokafana ny sarony fa safidy azo ahemotra amin'ny baiko tsotra
Apple sy Microsoft, angona momba ny vola Apple ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Herinandro iray hafa dia avelanay ianao miaraka amin'ny vaovao, tsaho ary lahatsoratra miavaka hafa amin'ny herinandro ao amin'ny Mac avy any Mac aho
Apple dia te hanavao ny fanamarinana dingana roa ary hanao azy io ho fenitra.
Apple dia te-hanolotra fa ny rafitra fanamarinana dingana roa dia hatao manara-penitra amin'ny alàlan'ny fanaovana ny zotra SMS amin'ny fomba tokana.
Apple dia meloka noho ny fanitsakitsahana ny patanty CalTech
Ny orinasa monina any Cupertino dia nasaina nandoa $ 838 tapitrisa noho ny fanitsakitsahana ny patanty CalTech
Rehefa avy nividy Xnor.ai dia manafoana ny fiaraha-miasa amin'ny Pentagon i Apple
Roa herinandro lasa izay, nampahafantarinay anao ny fividianana Apple farany. Miresaka momba ny orinasa Xnor.ai, orinasa ...
Apple Maps nohatsaraina vaovao any Etazonia, tsy ho ela any Eropa
Apple dia manavao ny fampiharana Maps ho an'ireo mpampiasa any Etazonia ary manambara fa ho avy tsy ho ela izy ireo dia any Eropa
Patanty hahafantarana fihetsika amin'ny satro-boninahitry ny Apple Watch
Patanty vaovao ho an'i Apple amin'ity tranga ity mifandraika amin'ny satroboninahitry ny Apple Watch, ny asany sy ny mifanentana amina tadiny marani-tsaina
AirPower, MacBook vaovao? Ming-Chi Kuo no mieritreritra izany ary betsaka kokoa
Ny tatitra farany avy any Ming-Chi Kuo dia milaza fa hanangana vokatra vaovao i Apple amin'ny taona 2020, ao anatin'izany ny toby famahanana tsy misy tariby amin'ny fomban'ny AirPower.
Ny AirPods Pro dia lany haingana ny tahiry dia mihena
Apple dia tsy mitantana hitazomana tahiry marin-pototra amin'ny AirPods Pro ary ny famokarana ireo dia tsy mitantana hamaly ny fangatahana avo
Milamina! Ny coronavirus dia tsy hisy fiantraikany amin'ny famoahana Apple na vokatra
Apple sy Foxconn mihitsy dia hanamafy fa tsy hanana olana amin'ny fandefasana amin'ity taona ity izy ireo noho ny coronavirus
11 × 20 Podcast: Tsingerintaona iPad, fahanterana ary firaketana vaovao
Misy fizarana vaovao amin'ny podcast Soy de Mac sy iPhone Actualidad ankehitriny misy ny vaovao Apple mahaliana indrindra.
Ny kalitaon'ny feo MacBook Pro dia minono ho an'ny mpanakanto Neil Young
Fanambarana vitsivitsy nataon'i Neil Young momba ny kalitaon'ny audio an'ny MacBook Pro mampitaha azy amin'ny kilalao, azo antoka fa tsy hamela olona tsy hiraharaha izy ireo
Ny sokajy Wearables dia nahazoana vola betsaka noho ny fivarotana Mac tamin'ny telovolana lasa teo
Ny vola vokarin'ny fivarotana Mac dia ambany noho ny nivarotra AirPods, Apple Watch, HomePods, Beats headphones
HomeKit dia tsy ho ela dia hifanaraka amin'ireo router Eero
Ireo router Eero dia tsy ho ela dia hifanaraka amin'ny HomeKit. Miaraka amin'ireo firmware vaovao dia efa niseho ho fitaovana ampiana amin'ny sehatra Apple izy ireo
Apple dia hihaona amin'ny andrana fidiram-bolany amin'ny telovolana voalohany
Nilaza ny mpandinika fa hahatanteraka ny antenaina tao an-tsainy i Apple ho an'ny telovolana voalohany ary hatramin'ny vola miditra amin'ny telovolana faharoa.
Nihaona i Apple sy i Microsoft hanambatra ny fidirana amin'ny angona fahasalamana
Nihaona i Apple sy i Microsoft hanambatra ny fidirana amin'ny angona fahasalamana. Tian'izy ireo ny data momba ny fahasalamana izay angonin'ny fitaovan'izy ireo hahatratra ny dokotera.